पाँचतारे हायात होटलको मनपरीमा मन्त्री अधिकारीको मौनता ! « Pahilo News
पाँचतारे हायात होटलको मनपरीमा मन्त्री अधिकारीको मौनता !
प्रकाशित मिति :4July, 2018 2:20 pm
काठमाडौ, २० असार । सरकारी स्वामित्व रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर रहेको ह्यात होटलमा भएको घोटालामा जो मन्त्री आए पनि मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री हुँदा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन अझै पनि बेवारिसे अवस्थामा थन्किएको छ । बुधवार साप्ताहिकबाट